Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina: Japana manatsara ny serivisy ao Haneda
Vaovaon'ny seranam-piaramanidina: Japana manatsara ny serivisy ao Haneda
Septambra 6, 2010
Amin'ity fararano ity, ny Japan Airlines (JAL) dia hanomboka sidina avy any Haneda mankany Etazonia, Eropa, ary Azia, ary ny fitsangatsanganana an-dranomasina dia tsy ho mora kokoa ho an'ny mponina any Tokyo, fa miaraka amin'ny fandrakofana anatiny ataon'ny JAL, ny mpandeha avy any amin'ny faritra Japon koa dia jereo fa mahafinaritra kokoa noho ny hatramin'izay ny fifandraisana any ivelany any Haneda.
Hanomboka handefa mpandeha ao amin'ny terminal international international Tokyo International Airport ny Japan Airlines rehefa hisokatra amin'ny fomba ôfisialy amin'ny 21 Oktobra 2010. Ho fanampin'izany, JAL koa dia hamoaka ireo fotodrafitrasa nohavaozina toa ny kaontera sy efitrano fandraisam-bahiny ao amin'ny terminal voalohany an'ny mpandeha an-trano satria ny fanatsarana dia vita amin'ny tapaky ny volana oktobra.
Mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa JAL izay hifandray eo amin'ny tamba-jotra anatiny sy izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny Haneda, JAL dia hanolotra lisitr'ireo serivisy sy fotodrafitrasa vaovao sy nohatsaraina miorina amin'ny foto-kevitry ny "Simplicity, Convenience, and Speed" ary ny fankasitrahany avy amin'ny fo. ho an'ny mpanjifany.
Fiaingana iraisam-pirenena JAL sy trano fandraisam-bahiny fahatongavana
Ny mpikambana JAL Mileage Bank (JMB) azo ekena, ary ny mpandeha kilasy voalohany sy ny ekipa mpanatanteraka dia afaka manantena ny fahatongavan'ny Arrival Lounge amin'ny diany miditra ary hahita fiononana amin'ny tontolo mahazatra rehefa manangana ny JAL First Class Lounge sy Sakura Lounge ny JAL. ho an'ny mpandeha miandry ny sidina.
Natao miloko mafana sy toerana malalaka misy raharaham-barotra, faritra fisakafoanana ary fialan-tsasatra voatokana, JAL dia mikendry ny hanome efitrano fandraisam-bahiny misy rivo-piainana manintona izay miaraka amina fotodrafitrasa azo ampiharina izay ilain'ny mpanjifa sarobidy koa. Ny maodely farany amin'ny seza fanorana sy ny toerana fandroana toy ny trano fandraisam-bahiny dia anisan'ny fampitaovana hafa atolotra mba hiantohana ny fampiononana farany ho an'ny mpandeha, indrindra ho an'ireo miandry ny sidina alina.
Amin'ny fahatongavany, ny mpandeha mahay dia afaka mampiasa ny JAL's Arrival Lounge voalohany indrindra, miaraka amin'ny fandroana fandroana ary toerana hanomezana sakafo maivana sy zava-pisotro maivana. Ireo mpandeha raharaham-barotra tonga ny maraina dia hahita ny Arrival Lounge izay manintona indrindra amin'ny fampiasa azy ho toerana hipetrahan'ny aina aorian'ny fitsaharana tsara eny ambony sambo ary alohan'ny hanombohana andro iray mamokatra ao amin'ny birao.
Ny fepetra mifehy ny fampiasana ireo efitrano fandraisam-bahiny sy ny antsipirian'ny serivisy omeny dia ho hita ao amin'ny pejy fandraisana JAL tsy ho ela.
Fifandraisana haingam-pandeha eo anelanelan'ny sidina vondrona JAL
JAL dia miasa sidina anatiny miala ny Terminal 1, izay efa manakaiky ny terminal iraisam-pirenena vaovao. Na izany aza, mba hanamorana kokoa ny fifamindrana eo amin'ny sidina ho an'ny mpanjifan'ny JAL sy ireo seranam-piaramanidina mpiaramiasa aminy dia hampiditra serivisy fitateram-bahoaka mivantana izay maharitra 8 minitra fotsiny ny JAL.
Ireo mpandeha misy fifandraisana amin'ny seranam-piaramanidina rezionaly any Japon ka hatramin'ny sidina iraisam-pirenena ao Haneda dia afaka manamarina ny entany mandritra ny dia manontolo. Raha toa ny mpandeha mifindra avy amin'ny sidina iraisam-pirenena mankany amin'ny zotra anatiny dia takiana ny haka ny entany rehefa tonga ao Haneda mba hahazoany fidiovana, ny JAL dia nanangana kaonteram-panamarinana ao an-toerana izay hita eo amin'ny terminal iraisam-pirenena ahafahan'ny mpandeha manamarina ny entany any an-toerana. ampahany alohan'ny hitsinjovana ny serivisy fitateram-bahoaka izay natolotr'i JAL ho any amin'ny fiaingany manaraka ary ny entany ihany no entin'izy ireo.
Amin'izao fotoana izao dia takiana amin'ny lalam-piaramanidina Haneda ny fomba fizahana arak'asa ho an'ny fifandraisana avy amin'ny sidina iraisam-pirenena ka hatramin'ny codeshare ampiasain'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa.
Fanavaozana ireo efitrano fandraisam-bahiny ao an-trano
JAL dia namindra ny efitranony anatiny ao amin'ny Terminal 1 mankany amin'ny rihana fahatelo amin'ny tranoben'ny terminal, izay manome fahitana ny lalam-by ankehitriny. Hosokafana amin'ny fomba ofisialy manomboka amin'ny 20 Oktobra ilay trano nohavaozina Diamond Premium sy Sakura Lounge. Manolotra ambina malefaka kokoa ho an'ny mpandeha sy fiainana manokana ny efitrano fitahirizana, ireo efitrano fandraisam-bahiny koa dia ahitana faritra fitehirizam-boky sahaza ho an'ireo mpandeha raharaham-barotra, toerana fandroana sy fanorana, ary koa efitrano fandraisam-bahiny azo ampiasaina mpanjifa mandeha miaraka amin'ny ankizy.
Ho an'ireo mpandeha tsy mahazo alalana amin'ny saranga fitsangatsanganany na ny maha-mpikambana azy matetika amin'ny flyer dia hanolotra ny fampiasana Sakura Lounge amin'ny sarany koa ny JAL. Ny mpandeha dia takiana amin'ny famandrihana amin'ny Internet alohan'ny diany. Ho hita ao amin'ny pejy fandraisana JAL ato ho ato ny pitsopitsony sy ny fepetra.
Fanatsarana ny kaonteram-pisavana
JAL dia nanamboatra ny kaonteran'ny Smiles Support sy ny laharam-pahamehana ho an'ny vahiny ao amin'ny rihana faharoa amin'ny Terminal 1.
Hita taratra amin'ny fandinihana lalina ireo mpandeha mila filàna manokana, ny kaontera Smiles Support dia mampiditra ny foto-kevitry ny Universal Design mba hahafahan'ny olona betsaka araka izay azo atao, na inona na inona taona na fahaizany ara-batana mampiasa azy mora. Ny JAL dia nanomboka nanompo avy tamin'ireo kaontera ireo izay tao amin'ny elatra atsimo sy avaratry ny terminal hatramin'ny Jolay sy Aogositra tamin'ity taona ity.
Fantatry ny JAL fa ny fotoana no tena ilain'ny mpandeha raharaham-barotra marobe ary noho izany dia niezaka izy ireo mba hampihena ny fotoana laniana tamin'ny fisoratana anarana ka hatramin'ny fidinana an-tserasera. Ny kaontera JAL First Class sy ny counter JAL Global Club (JGC) dia nohavaozina miaraka amin'io tanjona io ao an-tsaina, ary nisy fantsom-piarovana natokana ho an'ny mpandeha ny Kilasy JAL voalohany, mpikambana ao amin'ny JMB Diamond, ary mpikambana voalohany ao amin'ny JGC, hahafahan'izy ireo miroso amin-kalalahana sy haingana amin'ny alàlan'ny fiarovana ireo efitrano nohavaozina alohan'ny sidina.
Amin'ity fararano ity dia manasa ny mpandeha ny JAL hanatrika ireo serivisy vaovao ao Haneda.